November 14, 2020 - Padaethar
ချစ်သူ တွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ အဆင့် ( ၇ )ဆင့်
ချစ်သူ ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်အဆင့်မှာလဲ…? ချစ်သူတိုင်းဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့စာလေးပါ။ ချစ်သူ တွေ ကျော်ဖြတ်ရတဲ့အဆင့် ၇ဆင့်ရှိသတဲ့ ဖတ်မိတာတော်တော်သဘောကျလို့ သူငယ်ချင်းလည်းဖတ်ရအောင်ဝေမျှတယ်တိုက်ကြည့်ရအောင်နော်….. အဆင့် ၁။ အရူးအမူးဖြစ်ကြတဲ့ အဆင့်…. ဒါကတော့ ချစ်သူတိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ ပထမဦးဆုံး အဆင့်ပါ။ဒီအဆင့်မှာ ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရမ်းဆွဲဆောင်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အပြစ်မမြင်ကြဘဲ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကောင်းကွက်တွေပဲ ကွက်မြင်ကြတဲ့ အဆင့်ပေါ့။ အဆင့် ၂။ နားလည်မှုရလာတဲ့ အဆင့်…. ဒီအဆင့်မှာတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်ပိုသိလာကြပြီ။ ညဘက်တွေဆို ချစ်သူနဲ့ ဖုန်းတွေအကြာကြီးပြောမယ်။ မိသားစုအကြောင်းတွေ၊ ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းတွေ၊ လျို့ဝှက်ချက်တွေ အကုန်ပြောမယ်။ ပြီးရင် ချစ်သူဆီကလာတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းက ကိုယ့်အတွက် ချိုမြိန်နေမယ်။ ပျော်ရွင်စရာအချိန်လေးတွေပေါ့။ အဆင့် ၃။ အနှောင့်အယှက်ဝင်တဲ့ အဆင့်…. ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပြသနာလေးတွေ နည်းနည်းစလာပြီ။ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဦးဆုံး … Read more
စိတ်ရောကိုယ်ပါ ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ပြနေတဲ့ အပြုအမူ (၇) ခု
သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရာရာကို လက်ခံသွားနိုင်ပါပြီ အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေ လုံးဝကွာကျပြီး ကိုယ်အစစ်အမှန်ကို လက်ခံနိုင်ပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အနမ်း ချစ်သူနဲ့ တွေ့မှာမို့လို့ သွားသေချာတိုက်၊ ပီကေတွေစား၊ ချိုချဉ်တွေ စားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ တစ်နေကုန် စားချင်တာစားပြီး နမ်းလိုက်တဲ့အနမ်းမျိုး၊ အိပ်ရာထ အနမ်းမျိုးတွေကကတောင် ရင်ခုန်မှုပေးနေဆဲပါပဲ။ ၂။ အော့အန်ချိန်lover ဘယ်လောက်ပဲ ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသူပဲဖြစ်ဖြစ် အန်ပြီးစအချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုမှ သဘောကျစရာမရှိပါဘူး။ သူနဲ့အတူ သောကြာညအတူစားသောက်ပြီး လူမှန်းသူမှန်းမသိ မူးပြီး …. အော့အန်ပြီးတာတောင် ကိုယ်ဟာ သူ့အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတုန်းဖြစ်သလို သူကလည်း ကိုယ့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေဆဲ ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ၃။ လေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်လေးကျင့်ခန်းလုပ် မပြင်မဆင်ထားတဲ့ ပုံစံကို မြင်တွေ့ရတာထက် ချွေးတရွှဲရွှဲနဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပုံကိုလည်း မြင်တွေ့ဖူးတာတောင် ချစ်နေသေးလား စစ်ဆေးဖို့ပါ။ ဒီလိုအချိန်တွေတောင် … Read more
စစ်တပ် ကနေထွက်ပြီး ရဟန်းဝတ်တာ သုံးရက်သာရှိသေးတဲ့ “ တောဘုန်းကြီး” အခုတော့ အကြီးအကျယ် အခက်တွေ့…
နှုတ်ခမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ (၇) ချက် မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ မပြောတဲ့ အချက်များစွာရှိတာ သိပါသလား။နှုတ်ခမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာအချက်တချို့ ဝေမျှသွားပါမယ်။ နှုတ်ခမ်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထမင်းစားဖို့၊စကားပြောဆိုဖို့နဲ့ အနမ်းပေးဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် လူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ တခြားသိကောင်းစရာအချက်က အခြားသတ္တဝါတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ထင်ရှားတဲ့ အနားသတ်ရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ ၁။ နှုတ်ခမ်းဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ sensitive အဖြစ်ဆုံး အင်္ဂါရပ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ အာရုံကြောအဆုံးသတ် မီလျံမကရှိပေမယ့် ဒီအာရုံကြောဆဲလ်တွေမှာ ဘယ်အကာအကွယ်ပြုအမြှေးပါးမျိုးမှ မရှိပါဘူး။ ၂။ ချွေးဂလင်းတွေမရှိတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းမှာ ချွေးမထွက်ပါဘူး။ နှုတ်ခမ်းတွေမှာ ချွေးဂလင်းတွေမရှိတော့ တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများထက် ခြောက်သွေ့မြန်ပါတယ်။ ၃။ နှုတ်ခမ်းက လက်ဗွေကဲ့သို့ တမူထူးခြားတာ သိပါသလား။ လူတစ်ယောက်ဟာ … Read more
မင်္ဂလာပါဗျာ လက္ခဏာ ပညာ ကို ဝါသာနာ ထုံကာ လေ့လာလိုက်စားကြသော အမျိုးကောင်း သားသမီး တို့အတွက် လက္ခဏာပညာရဲ့အခြေခံဖြစ်သော လက်အမျိူးစား (၇)မျိုးအကြောင်း တတ်အားသ၍စေတနာများဖြင့် ပညာမျှဝေေ ပးလိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လက်ဝါကိုမှောက်ပြီး လက်ဖမိုးဖက်မှကြည့်ရန် ၁။အခြေခံအညံ့စားလက် လက်ဝါးလက်ချောင်းများ တုတ်ခိုင်ထူထဲ ကြမ်းတမ်းလွမ်းလှပြီး အမြင်ဆိုးလှပါသည်။ လက်ဖဝါး ဖက်ကိုလှန်ကြည့်လျှင်လည်း အသက်လမ်းညာဏ်လမ်းနှလုံးလမ်းဟူ၍ ၃ကြောင်းထဲသာ တုံးတိအနေနဲ့ဖြစ်နေတတ် သ ည်။ လက်သည်းများက ပေါက်ပြားပုံစံ။ ထိုလက်ပိုင်ရှင်တို့သည် ညာဏ်သမားမဟုတ်ကြပါ ကာယသမား ဗလအားကိုးတတ် သူအစစ်ဖြစ်ကြပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်သာသာညာဏ်လေးဖြင့် လောကအတွက်မိမိအတွက် ဘာကောင်းကျိူးမှမပြုနိုင် တတ် ကြပါ။ ဒေါသကိုမထိန်းချူပ်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူ မဆင်မချင်တုံးတိုက်ကမ်းဆိုက်လုပ်တတ်သည်။ သတ္တိမရှိ ဂုဏ်မရှိ ကြီးပွားလိုစိတ်မရှိ အိပ်မှု့စားမှု့ကာမမှု့သာ သူ့အတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ ဒီလက်မျိူးကို လက်ပြတ်ဟုခေါ်ကြပါသေးသည်။ ၂။လေးဒေါင့်လက် လက်ဝါး … Read more
ပိုက်ဆံ ဘယ်တော့မှ မကပ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ ငွေကြေး ဟာ သူတို့ဆီကနေ အမြဲထွက်ပြေးနေတဲ့ အချက် အချို့ကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ၁ – စိတ်မဝင်စား ပိုက်ဆံကို စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ ပိုက်ဆံရပေါက်ရလမ်းတွေကို စိတ်မဝင်စားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံရနိုင်မယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို စိတ်မဝင်စားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်မယ်ဆိုရင် သူများတွေက ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရနိုင်မယ့် နေရာမျိုးကို စုံစမ်းတတ်ပေမဲ့ သူတို့ကတော့ ဒါမျိုးအကျင့်မရှိပါဘူး။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင် စနစ်တကျ စီမံတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ၂ – အပေါင်းအသင်းများပြား သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများပြားတဲ့လူတွေဟာ အပျော်အပါးစရိတ် ပိုကုန်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်သွားတာ၊ တစ်နေရာရာသွားတာမျိုးတွေဟာ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးမှ ရတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို အလိုလိုက်ရင်း ကိုယ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ … Read more